VaChinamasa Voisa Zvimiti Munzveve paNyaya yeMazuva eSarudzo
HARARE — Gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vari kuenderera mberi nekuda kuti chikumbiro chavakasvitsa kudare repamusorosoro chekuti sarudzo dziitwe musi wa 14 Nyamavhuvhu chinzwikwe kunyange hazvo vatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa vakavaudza kuti vabvise mapepa enyaya yavo kudare kusvikira pave nekuwirirana muhurumende pamusoro pezvichasvitswa kudare.
Gweta raVa Chinamasa, Va Freddy Gijima, vanoti Va Chinamasa vari kuenderera mberi nenyaya yavakakwidza kudare iri vachikumbira kuti sarudzo dzipfuudzirwe mberi.
Va Chinamasa vakaenda kudare vachiti vatumwa nemutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe, kuti vanokumbira kuti sarudzo dzakanga dzanzi nemutungamiri wenyika dziitwe musi 31 Chikunguru dzipfuudzirwe mberi kuitira kuti dzigozoitwa musi wa 14 Nyamavhuvhu.
Asi VaMugabe nevamwe vatungamiri vemapato ese ari muhurumende vakaita musangano neChitatu vakabvumirana kuti VaChinamasa vabvise mapepa avakasvitsa kudare kudzamara mapato ari muhurumende abvumirana pane zviri kunetsa pamusoro pezuva richaitwa sarudzo.
Va Gijima vanoti nyaya yakakwidzwa kudare naVa Chinamasa ichanzikwa neChitatu svondo rinouya mushure mekunge VaChinamasa vasvitsa chikumbiro neChitatu mushure memusangano wevatungamiri vemapato ari muhurumende chekuti nyaya yavo inzwikwe nechimbichimbi.
Gweta raVaMorgana Tsvangirai vanove mutungamiri wehurumende, VaChris Mhike, vashamiswa nedanho ratorwa naVa Chinamasa iri.
Zvisinei, VaMhike vanoti havana dambudziko nekuti nyaya iyi inzwikwe nechimbichimbi sezvo ichibata veruzhinji munyika.
Zvaitwa naVa Chinamasa izvi zvinopesana nezvakawiriranwa nevatungamiri vemapato neChitatu pamwe nezvakakurudzirwa nesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kwe Africa, reSADC, kuti zviitwe kuitira kuti sarudzo dzakatarisirwa kuitwa gore rino dzigoitwa zviri pachena.
Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo yanga iri mudare iri, mukuru wevatongi, VaGodfrey Chidyausiku, vabvuma zvakare kuti nyaya yakasvitswa kudare nemutungamiri webato re Zimbabwe Development Party, Va Kisinoti Mukwazhi, inzwikwe nechimbichimbi. VaMukwazhi vanoti vari kuda kuti mapato asiri muhurumende apihwe mari nehurumende yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo.
VaMukwazhi vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekusapa mari mapato asiri muhurumende zvinotyora kodzero dzavo dzekuva nemikana yakaenzana musarudzo.
Dare repamusorosoro rinoti nyaya dzose dzine chekuita nesarudzo dzegore rino dzakasvitswa kudare iri dzichakwinzwa nechimbichimbi kubva neChitatu chinouya pasina kana kutura mafemo.